newposts2021, Author at Newposts - Page2of 329
Articles by newposts2021
ဘဝခရီးလမ်းကို လျှောက်ရတဲ့အခါ ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားပါ သူငယ်ချင်း
July 3, 2022 newposts2021 0
ဝမ်းမနည်းပါနဲ့ အမှီအခို မရှိခဲ့တာ အားနည်းချက်မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘယ်အခြေအနေမှာဆို ရှင်သန်ရဲ့တဲ့စိတ်ကသာ အဓိကပါသူငယ်ချင်း တွေးမပူနဲ့ ဖေးကူမှုဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲရှိတယ်။ ပျော့ညံ့ရင် လဲကျမယ်။သင့်ကိုသင် မယုံကြည်ရင် သင့်ကို ယုံ ကြည်မယ့်သူ ရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး ။ စိတ်ကူးမယဉ်နဲ့ လေထဲအိမ်ဆောက်ရတာ အရမ်းလွယ်တယ်စိတ်ကူးတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းအလှပဆုံးမက်လို့ရတယ်လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာ ခက်တယ် […]
မိသားစုအပေါ် သိတတ်လိမ္မာတဲ့ သမီးတွေသာ သိနားလည်တဲ့ အခက်အခဲလေးများ
မိဘဆိုတာ အပေးပဲ ရှိပြီး အယူ မရှိဘူးလို့ ပြောစမှတ် ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိသားစုအပေါ် သိတတ်တဲ့ သူအများစုကတော့ သမီးမိန်းကလေးတွေဖြစ်နေတတ် ပါတယ်..။ မိသားစုအပေါ် အဲ့လို သိတတ်တဲ့ သမီးတွေမှာ သူများတွေ ထက် ပိုတဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိလို့ နေတတ် ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ […]
MESSAGES လေးတွေရဲ့တန်ဖိုးချစ်သူတွေကြားမှာဖြစ်စေ ” လင်မယားတွေကြားမှာဖြစ်စေကိုယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်.. ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့.. massage လေးတစ်ကြောင်းက တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဘယ်လောက် အလေးနက်ထားတယ်ဆိုတာကို သိသာစေပါတယ် ။ တကယ်တော့လူတွေပြောနေကြတဲ့ ” ချစ်တယ် ” ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပိုပြီးနီးစပ်စေတာကလွဲပြီးရင်ဘတ်ထဲကိုတော့ မထိရောက်စေပါဘူး ။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို ကြိုက်သလောက်ပြောပါစေသူငါ့ အေပ်ါတကယ္ခ်စ္ပါလား ” သူ […]
မျက်နှာသစ်ပြီးမှ သွားတိုက်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း
မျက်နှာသစ်ပြီးမှ သွားတိုက်ပါ… နံနက်အိပ်ယာထတဲ့အခါ သမျက်နှာသစ်ပြီးမှ သွားတိုက်ပါသလား..? ဒါမှမဟုတ် သွားကို သွားပွ တ်တံနဲ့အရင်တိုက်ပြီး ပ လုတ်ကျင်း၊ ခံတွင်းသန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်လေ့ရှိသလား…?ဒီလို အကျင့်လုပ်ခဲ့တာကောနှစ်ပေါင်းကြာပြီလား…? ညအိပ် ပျော်သောအခါတွင် ဝမ်းတွင်းအစာခြေ အင်္ဂါစုများမှာ အနားရလေသည်။ထိုအခါ အစာဟောင်းအိမ်မှ အပုပ်အခိုးများသည် အကြောများ မှတဆင့် အ ထက်မျက်နှာ၊ […]
မိခင်တစ်ယောက်၏ အလှပဆုံးသောမုသားစကားကြီး ၈ ခွန်း
မိခင်တစ်ယောက်၏ အလှပဆုံးသောမုသားစကားကြီး ရှစ်ခွန်း…. ကျွန်တော် ကလေးဘဝအရွယ်တုံးက အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာ နေ့စဉ်ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားဖို့တောင် မသေချာတဲ့နေ့တွေရှိခဲ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ အမေကတော့ မကြာခဏ သူ့ပန်းကန်ထဲက ထမင်းတွေကိုယူယူပြီး ကျွန်တော့်ထဲ အမြဲထည့်ထည့်ပေးတတ်တယ် ။ ပြီးရင် အမေပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ် ။ […]
နောက်(၂)ရက်မှ (၃)ရက်အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံမယ့် ဒေသများကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုးမင်းသမီးလေး စုစုစံ
နောက်(၂)ရက်မှ (၃)ရက်အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံမယ့် ဒေသများကို ခန့်မှန်းပေးလိုက်တဲ့ မိုးမင်းသမီးလေး စုစုစံ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုတ်သုန်လေအားအသင့်အတင့်ရှိနေပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမှာအားကောင်းလာနေပါတယ် တနင်္သာရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း မန္တလေးတိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ် တနင်္သာရီ တိုင်းတွင်မိုးရွာနိုင်ပြီး မြိတ် ဘုတ်ပြင်းဒေသများတွင်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်း […]
ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အတုအစစ် ခွဲခြားနိုင်ဖို့… သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
ယနေ့လို နည်းပညာ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ မသမာသောနည်းနဲ့ ငွေရှာသူတွေအတွက်လည်း ခွင်(ဂွင်)တွေ များစွာကျန်နေပါသေးတယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မသမာတဲ့ဝိသမလောဘသမားတွေက ရှိနေတာပါ။အခု ဖော်ပြချင်တာကတော့ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ပစ္စည်းကို အတု/ အစစ် ခွဲခြား သိနိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာပါ/ မပါ […]
သင့်နာမည် အစစာလုံးတွေက ပြောပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကြောင်း …!
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ အကျင့်စရိုက်လေးတွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိတယ်လို့ ယုံပါရဲ့လား။ ဥပမာ သူ့နာမည်က Su Su ဆိုရင် နာမည်အစ စာလုံးက S ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့နာမည်အစစာလုံး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သိချင်တဲ့လူရဲ့ နာမည်အစစာလုံးကိုကြည့်ပြီး သူက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာအောက်က အချက်တွေ မှန် မမှန် အကဲခတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ […]
ထောပတ်သီးကို… အနာကင်းစွာမှည့်ရန်နှင့် မှည့်နေသောထောပတ်သီးများအား ထားသိုနည်း
ထောပတ်သီးကို… အနာကင်းစွာမှည့်ရန်နှင့် မှည့်နေသောထောပတ်သီးများအား ထားသိုနည်း ၁။ ရေ လုံးဝ ( လုံးဝ ) မထိပါနဲ့ ဒါထောပတ်သီးစားသူတိုင်း သိထားရမဲ့အချက်ပါနော် ( ရေလုံးဝမထိရပါဘူး။) အညှာထဲရေဝင်ရင် အမျှင်မဲတွေပေါ်လာပြီး ပုတ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘုရားကပ်မယ်။ လက်ဆောင်ပေးမှာမို့ လှချင်တယ်ဆိုရင်တော့ tissue အစိုနဲ့သုတ်ပြီး။ အဝတ်ခြောက်ဖြင့်သေချာစွာ […]
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် အောင်မြင်စေမယ့်နည်းလမ်း (၅)ခု
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် အောင်မြင်စေမယ့်နည်းလမ်း (၅)ခု ကိုယ် ပိုင်စီး ပွား ရေး တည်ထောင်မယ့်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ရန်အတွက် အဆက်အသွယ်ကောင်းများ အများအပြားရှိဖို့ လို အပ် ပါတယ်။ မိမိရဲ့Networking ပိုင်းကို ချဲ့နိုင်သမျှ များများချဲ့လေ မိမိရဲ့စီးပွားရေး အောင်မြင်လေပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကိုယ် ပိုင်စီးပွားရေးကို စတင်လုပ်ကိုင်မယ့် […]
အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတောင်မှ တစ်နှစ်အတွင်း ငွေအမြောက်အများ စုမိစေမဲ့ နည်းလမ်း ၃ ချက်
ပျက်စီးနေပြီး အဖျားနှစ်ခွဖြစ်နေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် ရှားစောင်းလက် ပပ် နဲ့ အုန်းဆီကို ရောသုံးနည်း
စကတ်၊ဘောင်းဘီ အတိုဝတ်ချင်ပေမယ့် ဒူးခေါင်းတွေ မည်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေ အတွက်
ဖုန်းမှန်ကွဲနေတာ ဆက်သုံးရင် ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုး